Akụkọ - Ndị Na-ahụ Maka Anya Na-amalite Anya Na Ahụike Nlekọta Ahụ - Sunshine Teknụzụ
Investors Eye Start-Ups In Health Care Sector - Sunshine Teknụzụ
The Global Entrepreneurship Week (Gew) China Station Of 2020 (Nke iri na anọ) Emebere Site na Nọvemba 13 ruo 18, 2020. Ejiri ya na Mba 170, Gew Bụ Otu n’ime Ihe Omume Kachasị emetụta na Ngalaba Globalzụ ahịa Globalwa. Na 2020, Gew-China Ga-Anakọta Enterlọ Ọrụ buru ibu, Servicelọ Ọrụ Na-amalite Ọrụ, Ndị Ntinye ego na ndị ọchụnta ego Iji Mepụta 50 + Ihe Na ụbọchị 6, Kpọkọta 1000 + Investors Na Shanghai, Jikọtara Na 100 + Ndị Isi Ntanetị Ntanetị, Na-adọta 1000 + Ndị ọchụnta ego, Na Jikotara Aka Mepụta An Na-anọghị n'ịntanetị Ego Na Market Docking Platform Na-elekwasị Anya Industries.
N'ihi Mmetụta Ọrịa Ahụ, Ọhụụ Ọhụrụ Na Ahụike Ahụike Adọrọla Ndị Ntinye Aka. Dr. Xu Dehui, onye guzobere Sunshine Technologies, kwuru na mkparịta ụka mkparịta ụka, ọchịchọ maka ihe mmetụta sensọ nke Thermopile Infrared na Modul Sensor abawanyela nke ọma n'ihi ọrịa ahụ. Nkezi Onwa kwa ọnwa ugbu a dị ka nke ọnwa isii gara aga. Mgbe anyị na-ekwe nkwa ahịa ahụ, anyị na-arụkwa ọrụ ọhụụ & ihe ọhụụ. N’ọnwa Ọgọstụ, Anyị nwetara Nkwado sitere n’aka Ministrị Sayensị Na Teknụzụ Na-aga n’ihu Imeziwanye Nzizi nke Sensọ Na Ọnọdụ Ihu Igwe. N'ọdịnihu, Companylọ ọrụ anyị ga-aga n'ihu itinye ego na r & d ma nye ndị ahịa na Society aka.
Tọrọ ntọala na 2016, Sunshine Teknụzụ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke mba na-ahụ maka nyocha teknụzụ, mmepe ngwaahịa, mmepụta, ire ahịa na inye nkwado teknụzụ metụtara yana azịza ngwa maka MEMS sensọ infrared. Sunshine Teknụzụ abughi naanị ụlọ ọrụ ụlọ izizi mbụ nwere ọkaibe na teknụzụ mgbawa nke smart thermopile sensọ infrared, kamakwa ụlọ ọrụ izizi mbụ nke guzobere usoro nkwado ngwaahịa maka imepụta ngwaahịa. Igwe ihe omimi nke infrared ya nke oma ejirila nke oma mebie ihe ndi ozo. Sensorlọ ọrụ infrared ziri ezi nke ụlọ ọrụ ahụ nwere oke nkenke okpomọkụ nke 0.05 ℃. (Nlekọta ihe nlele ahụike ahụike na-abụkarị naanị mkpa ± 0.2 ℃). Ọ na - anabata ikike izizi nke onwe na teknụzụ mmepe, yana ihe nchọpụta ọnọdụ gburugburu ebe obibi ihe mmetụta ziri ezi karịrị 15 ugboro karịa ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya (izi ezi sitere na 3% ma ọ bụ 5% ruo 0.2%). Na mgbakwunye, ihe mmetụta infrared ziri ezi nke Sunshine nabatara usoro ihe eji arụ ọrụ nke ọma, arụmọrụ ọkụ-ọkụ ọkụ eletrik bụ otu usoro ịdị elu karịa nke ngwaahịa ndị ọzọ na mba ofesi. N'otu oge ahụ, ihe mmetụta infrared infrasred zuru oke nke Sunshine bụ naanị ngwaahịa mepụtara, yana mmezi teknụzụ kwekọrọ na emeela na nkwakọ iji nweta mkpa ndị ahịa ka mma.
N'oge ọrịa COVID-19 na-efe efe na 2020, Sunshine Teknụzụ gosipụtara na enwetara ihe mmetụta sensọ maka ọkpọ ọkụ n'egedege ihu na mba ahụ niile, ọkachasị na-ebute ụzọ nke ihe mmetụta maka isi nsogbu ọrịa na Hubei na ntinye gọọmentị nyere ọnụọgụ nke ihe mmetụta temometa nke egosiri karịa. Nde 2. Sunshine natara onyinye na ekele site na Ministry of Industry and Information Technology nke ndị mmadụ Republic of China, isi ụlọ ọrụ Hubei maka isi na Mgbochi na Nchịkwa nke Ọrịa Pneumonia Novel, na Shanghai Economic and Information Technology Commission. Igwe ihe omimi nke Sunshine 'CMOS-MEMS nke oma ihe ngosi ihe omimi nke infrared nwere ike rụọ oke ọrụ na nchedo ihe n'oge oria a. Enweghi ike ịhapụ ya site na nha nkenke dị elu, ntụkwasị obi dị mma na nkwekọ nke ngwaahịa ya, na teknụzụ ndị dị n'elu. Nkọwapụta ahụ bụ isi ihe ọrụ nchịkwa chọrọ na ihe mgbaru ọsọ nke ihe mmetụta infrared na ụlọ ọrụ ahụ na-achụ. Sunshine Teknụzụ emechaala nweta nnabata ndị ahịa na ahịa site na nke ọhụụ na-aga n'ihu nke teknụzụ ndị bụ isi.
The Sunshine Teknụzụ ga-ewepụta mmepe nke "Thermopile Infrared Chinese Core" dị ka ebumnuche ya, ma gbalịsie ike bụrụ onye na - eweta ụlọ na ụlọ ọrụ ụwa nke MEMS Thermopile Infrared Sensors, wee bụrụ onye ndu ụwa niile na ụlọ ọrụ ihe mmetụta infrared infrared MEMS MEMS, na-enweta ndụ mara mma ma dị mma site na ịchọpụta infrared.